गुर्भाकोटमा १ हजार ३४ जना क्वारेन्टाईनमा, ९ जना आईसोलेसनमा – nepaldarsan
गुर्भाकोटमा १ हजार ३४ जना क्वारेन्टाईनमा, ९ जना आईसोलेसनमा
नेपाल दर्शन संवाददाता । २९ जेष्ठ २०७७, बिहीबार मा प्रकाशित
देबेन्द्र वली ।2 गुर्भाकोट २९ । गुर्भाकोट नगरपालिका सुर्खेतले क्वारेन्टाईन व्यवस्थापनको कामलाई तिब्रता दिएको छ । नगरपालिकाको तथ्यांक अनुसार नगरको १९ स्थानमा क्वारेन्टाईन निर्माण गरिएको छ भने एक स्थानमा आईसोलेसन वार्ड निर्माण गरेको छ । जसमा यो समाचार तयार पार्दासम्म ३४ जना नयाँ थप गरी हाल १ हजार ४३ जना नागरिकहरु क्वारेन्टाईनमा रहेका छन् । ३४ जनामा सवै पुरुष मात्र रहेका छन् । जसमा सवैभन्दा धेरै नागरिकहरु भारतबाट आएका नागरिकहरु रहेका छन् । क्वारेन्टाईनमा १ सय ७९ महिला र ८ सय ६४ पुरुष रहेका छन् । जस मध्ये २८ जना बालबालिका र ४० जना वृद्ध वृद्धाहरु रहेका छन् ।
हालसम्म क्वारेन्टाईनमा रहेको मध्ये १७ सय ५७ जनामा ७२ महिला र ६ सय ९१ पुरुष मात्र आर डी.टी. परिक्षण गरिएको जानकारी गराईएको छ । आर. डी.टी गरिएको ७ सय ६३ जना.मध्ये १ जना महिला र १२ जना पुरुषमा आर.डी.टी पोजेटिभ देखिएको छ । भने १२ जना महिला र ५० जना पुरुषमा पी.सी.आर परिक्षण गरिएकोमा ४ जना महिला र ५ जना पुरुषमा पी.सी.आर पोजेटिभ देखिएको छ । ती ९ जनालाई मेहेलकुना आईसोलेसनमा राखिएको छ । हालसम्म ५७ जना महिला र ६ सय ६२ जना पुरुष गरि जम्मा ७ सय १९ जनालाई आ–आफ्नो घर फर्काइएको नगरपालिकाको दैनिक क्वारेन्टाईन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नगरपालिकाको व्यवस्थापनमा रहेका सवै क्वारेन्टाईनमा रहेका नागरिकहरुलाई कुनै समस्या हुन नदिन सवै जन प्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी, वुद्धिजिवी, प्रहरीहरु लगाएत सुरक्षामा खटिएका छन् । जिल्ला बाहिरबाट नगरभित्र प्रवेश गर्ने नागरिकहरुलाई व्यवस्थित तरिकाले उद्धार गरि क्वारेन्टाईमा राख्ने गरेको नगर उप –प्रमुख मैना विकले जानकारी दिनुभयो । नगर भित्र रहेका विभिन्न क्वारेन्टाईन स्थलको निरिक्षण गदै कुनै समस्या हुन नदिन नगरपलिका र प्रतिनिधि, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी र वुद्धिजिवीहरु लागिपरेको बताउनुभयो ।